Homeသန္ဒိဋ္ဌာန်နှစ်တိုင်း ပြန်ဖတ်သင့်တဲ့ နှစ်သစ်ကူး သန္နိဋ္ဌာန် ချမှတ်နည်း ( အဆင့် ၇ ဆင့် )
SUPPORTMM November 14, 2021
နှစ်ဟောင်းကုန်လို့ နှစ်သစ်ကူးတိုင်းမှာ ကျွန်တော်တို့ အများစုဟာ လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်တယ်လို့ထင်တဲ့ အရာတွေကို မဖြစ်မနေလုပ်မယ်လို့ သန္နိဋ္ဌာန်ချ ဆုံးဖြတ်ကြလေ့ရှိပါတယ်။ တချို့လည်း တိတိကျကျ ခိုင်ခိုင်မာမာ လုပ်ကြတာရှိသလို၊ တချို့လည်း အများလုပ်လို့ လိုက်ပြီး ဇဝေဇဝါနဲ့ လုပ်ကြတာမျိုး ရှိတတ်ပါတယ်။
ဘာကြောင့်ပဲလုပ်လုပ် ဒီအလေ့အကျင့်ဟာ ကျွန်တော်တို့ ဘဝတွေအပေါ်မှာ ယေဘူယျအားဖြင့်တော့ အကျိုးသက်ရောက်မှုကောင်းတွေ ဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်လေ့ရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဘဝမှာ အောင်မြင်ပျော်ရွှင်နေတဲ့ လူအများစုဟာ ဒီအလေ့အကျင့်လေးကို သိသိသာသာဖြစ်စေ၊ မသိမသာဖြစ်စေ လုပ်ကြလေ့ရှိပါတယ်။
သိသိသာသာ ဆိုတာက သူတို့ချမှတ်လိုက်တဲ့ နှစ်သစ်ကူး သန္နိဋ္ဌာန်တွေကို တစ်ခုခုထဲမှာ ချရေးတာ၊ Social Media ပေါ်မှာ အများကို တိုင်တည် ကြေညာကြတာဖြစ်ပြီး မသိမသာဆိုတာက ချမရေးဖြစ်ပေမယ့် သေသေချာချာ ပြန်လည်ဆန်းစစ် တွေးတောကြတာကို ဆိုလိုတာပါ။
တကယ်အောင်မြင်သူ အများစုဟာ တစ်သက်စာ၊ တစ်ဘဝလုံးစာ သွားရမယ့် လမ်းကြောင်း၊ လုပ်ရမယ့် အလုပ်တွေကို ယေဘူယျ အစီအစဉ် ရှိနေပြီးသားမို့လို့ နှစ်သစ်ကူးကျမှ ဒီလိုလေး ကောက်လုပ်ကြတာမျိုးက သူတို့အတွက်တော့ သိပ်မထူးခြားလှပါဘူး။ သူတို့ဟာ မိမိကိုယ်ကို အမြဲ ဆန်းစစ်ဆင်ခြင်နေကြတာကိုး။
ဒါကြောင့် နှစ်သစ်ကူး သန္နိဋ္ဌာန် ချမှတ်တာကို လုပ်တတ်ပြီးသား၊ လုပ်နေကျ လူတွေအတွက်တော့ ဘာမှထွေထွေထူးထူး ပြောနေစရာမလိုပေမယ့် အခုမှစပြီး ဒီ အလေ့အကျင့်လေးကို မွေးမြူကြည့်ချင်တဲ့ လူငယ်တွေ၊ သူများ လုပ်လို့သာ လုပ်နေရတယ် တကယ်တမ်းကျ ဇဝေဇဝါနဲ့ စမ်းတဝါးဝါး လုပ်နေရသလိုမျိုး ခံစားနေရတဲ့ လူငယ်တွေအတွက် ဒီစာစုလေးကို ရေးပေးလိုက်တာပါ။
ကျွန်တော် (ကိုဇင်ဇေ) အနေနဲ့ သိလွန်း၊ တတ်လွန်းလို့ ဆရာကြီးလုပ်ပြီး ရေးပြရတာ မဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ ဖတ်ခဲ့၊ မှတ်ခဲ့၊ လိုက်နာကျင့်သုံးခဲ့ဖူးတာလေးတွေထဲက တချို့ကို စာဖတ်သူတွေအတွက် အကျိုးတစ်ခုခု ဖြစ်ပါစေလို့သာ ရည်ရွယ်ပြီး ရေးသားလိုက်ရတာပါ။
ကဲ ကျွန်တော်တို့ စကြရအောင်ဗျာ။
နှစ်သစ်ကူး သန္ဒိဋ္ဌာန်ချရာမှာ ပထမဆုံး လုပ်သင့်တယ်လို့ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ယုံကြည်ယူဆထားတဲ့ အချက်ကတော့
”မိမိရဲ့ စံတန်ဖိုးများကို ပြန်လည်ဆင်ခြင် သတ်မှတ်ဖို့” ပါပဲ။
ကျွန်တော် လူငယ်တွေအတွက် ရေးခွင့်ရတဲ့ စာတိုင်း၊ စကားပြောခွင့်ရတဲ့ ပွဲတိုင်းမှာ အမြဲ သတိပေးလေ့ရှိပါတယ်။ ဘဝ အောင်မြင်ဖို့ဆိုတာ ဘဝ ပန်းတိုင် ချမှတ်တတ်ဖို့ လိုတယ်။ အဲလို ချမှတ်တဲ့နေရာမှာလည်း အများစု အသုံးပြုနေကြတဲ့ “S.M.A.R.T” ဆိုတဲ့ နည်းစနစ်ဟာ အားသာချက်တွေ ရှိပေမယ့် “ဟ” နေတဲ့ အချက်လေးတွေလည်း ရှိနေတတ်သေးတယ်။ ဒါကြောင့် တတ်နိုင်သမျှ Goal Setting ချမှတ်တဲ့ မူကွဲတွေကို လေ့လာထားပြီး ကိုယ်နဲ့ ကိုက်ညီအောင် ပြန်လည် အသုံးချပါလို့။
(“S.M.A.R.T” အကြောင်းကတော့ ရေးထားပြီးသူ အတော်များများရှိလို့ ဒီစာစုမှာ အကျယ်မဆွေးနွေးတော့ပါဘူး။)
ကျွန်တော့်အနေနဲ့ကတော့ လူတစ်ယောက် ဘဝမှာ အောင်မြင်ချင်ရင်၊ ကျေနပ်ပျော်ရွှင်ချင်ရင် ပထမဆုံး လုပ်ရမှာက မိမိရဲ့ စံတန်ဖိုးများကို သေသေချာချာ တိတိကျကျ သတ်မှတ်ထားဖို့ပဲလို့ ယူဆပါတယ်။ ဒီလို မလုပ်ထားရင် မလိုအပ်ဘဲ ကိုယ့်ဘဝလမ်းကြောင်းဟာ အချိန်ကုန်၊ အင်အားကုန်ပြီး လိုရာမရောက် ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အချိန်ကြာလာပြီး အတော်လေးခရီးလွန်မှ သိရင် အရမ်းနစ်နာရတတ်ပါတယ်။
(ကျွန်တော့်ဘဝနဲ့ ရင်းပြီး သိခဲ့ရတဲ့ အသိပါ။ ကျွန်တော့်စာစုဟောင်းတွေမှာ ကျွန်တော့်အကြောင်း ပြောပြတဲ့အခါ အမြဲပြောနေကြပါ။ မဖတ်ဖူးသေးတဲ့ လူငယ်တွေအနေနဲ့ အောက်ပါစာစုမှာ သွားဖတ်နိုင်ပါတယ်။
ပန်းတိုင် ပျောက်နေပါတယ်ဆိုတဲ့ လူငယ်တွေကို အကြံပေးချင်တာ >>>
” ပန်းတိုင် ပျောက်နေပါတယ် ဆိုတဲ့ လူငယ်တွေကို အကြံပေးချင်တာ “
ဘာလုပ်ရမှန်းမသိဖြစ်နေတဲ့ လမ်းပျောက်လူငယ်များအတွက် >>>
For those who don’t know which path to choose
တကယ်တော့ လူတိုင်း လူတိုင်းမှာ မတူညီတဲ့ တန်ဖိုး၊ စံ သတ်မှတ်ချက်တွေ ရှိပါတယ် ။
တချို့က ဘဝမှာ ငွေကို အဓိက တန်ဖိုးထားတယ် ။
တချို့က ဘာသာရေး၊ သံသရာမှ လွတ်မြောက်ရေး၊
တချို့က လူပီသရေး၊ လူသားဆန်ရေး စသည် စသည်ဖြင့်ပေါ့ဗျာ။
ဒီလို စံသတ်မှတ်ချက်တွေဟာ သူတို့ ရှင်သန်ကြီးပြင်းလာရာ ပတ်ဝန်းကျင်၊ အခြေအနေတွေအပေါ်မှာ မူတည်နေသလို လက်ရှိ သူတို့ ကျင်လည်နေရတဲ့ အခြေအနေတွေနဲ့လည်း အများကြီးဆိုင်ပါတယ်။
ဘယ်ဟာကို ဘယ်လို ဦးစားပေးအဆင့် သတ်မှတ်ရမယ်ဆိုတာ တစ်ဦးနဲ့တစ်ဦး ညှိလို့ရဖို့ သိပ်မလွယ်ပါဘူး။တစ်ဦးအတွက် တစ်ဦးက ဆုံးဖြတ်ပေးတာမျိုးလည်း မဖြစ်သင့်ပါဘူး။ အကြံဉာဏ် ပေးလို့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဝင်ပြီးတော့ ဆုံးဖြတ်ပေးတာမျိုးတော့ မလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဒီတော့ လူ တစ်ယောက်ဟာ ဘယ်သူ့ကြောင့်မှ မဟုတ်ဘဲ ခိုင်မာသေချာတဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို ချမှတ်နိုင်ဖို့ ကိုယ်ပိုင်ဦးစားပေးစံသတ်မှတ်မှုတွေ လိုအပ်မှာပါ။ မိမိရဲ့ပန်းတိုင်ကို စနစ်တကျ ချမှတ်တဲ့ နေရာမှာ ဒီအဆင့်ကို လုံးဝ ကျော်မသွားသင့်ပါဘူး။
ဒီလိုပဲ။ အခုလို နှစ်ဟောင်းတစ်ခု ကုန်လို့ နှစ်သစ်တစ်ခု ကူးပြောင်းချိန်၊ နှစ်သစ်ကူး သန္ဒိဋ္ဌာန် ချမှတ်ချိန်မှာလည်း ကိုယ့်ရဲ့တန်ဖိုး၊ စံ သတ်မှတ်မှုတွေကို ပြန်လည်ဆင်ခြင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်နှစ်နဲ့ တစ်နှစ် ကိုယ့်ရဲ့အနေအထားတွေ၊ ပတ်ဝန်းကျင် အခြေအနေတွေ မတူတော့တာမျိုး ဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက် တန်ဖို ၊ စံ သတ်မှတ်မှုတွေကိုလည်း လိုအပ်ရင် ပြောင်းလဲသတ်မှတ်ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါမှ ဘယ်တန်ဖိုးကို ရယူဖို့အတွက် ဘယ်လောက်အချိန်နဲ့ အင်အားကို စိုက်ထုတ်မယ်ဆိုတာကို ထိထိရောက်ရောက် စီမံခန့်ခွဲနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီတော့ စာဖတ်သူတွေအနေနဲ့ အောင်မြင်ပျော်ရွှင်ပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကျေနပ်တဲ့ ဘဝမျိုးကို ပိုင်ဆိုင်ချင်တယ်ဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့ တန်ဖိုး၊ စံ သတ်မှတ်မှုတွေကို ဦးစားပေး အဆင့်အလိုက် သတ်မှတ်ဖို့ကို အရင်ဆုံး လုပ်စေချင်ပါတယ်။ ဥပမာအနေနဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ ဒီနှစ် ၂၀၁၆ အတွက် စံသတ်မှတ်မှုပုံစံကို နမူနာ ရေးပေးလိုက်ပါတယ်။
လူသားဆန်မှု၊ လူပီသမှု၊ လူ့သိက္ခာရှိမှု (ကိုယ်ကျင့်တရား၊ ကိုယ်ချင်းစာစိတ်၊ ရိုးသားခြင်း… စသည်…)
ငွေကြေး ဖူလုံမှု၊ တိုးတက်မှု၊ လွတ်မြောက်မှု
အသိပညာ၊ ဗဟုသုတ တိုးပွားလာခြင်း၊ ဖြန့်ဝေနိုင်ခြင်း
မိသားစု ဆက်ဆံရေး ပိုမိုကောင်းမွန်ခြင်း၊ မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းများ ပိုမိုများပြားလာခြင်း
ဂီတ၊ ကဗျာ၊ ရသ၊ အနုပညာကောင်းများ ခံစား၊ ဖန်တီးနိုင်ခြင်း
(ဥပမာအနေနဲ့ မြင်သာအောင် ရေးပြလိုက်တာဆိုတော့ မဟုတ်ကဟုတ်ကတွေ မပါဘဲ အကောင်းချည်းပဲ ဖြစ်နေတာတော့ သည်းခံပါခင်ဗျာ… 😛)
အခု ဒုတိယအဆင့်ကို ပြောပါရစေ ။
ဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ လုပ်သင့်တာကတော့ မိမိရဲ့ လက်ရှိအခြေအနေကို သေချာပြန်လည်စုစည်းသုံးသပ်ဖို့ပါ။ ဒီနှစ်အတွင်းမှာ လုပ်ခဲ့တာ၊ လုပ်နေတာတွေကို သေချာစုစည်းပါ။ ဖြစ်နိုင်ရင် နံပါတ်စဉ်တပ်ပြီး သေချာချရေးပါ။ ဒီအတိုင်း စဉ်းစားလည်းရပေမယ့် တခါတလေမှာ အရေးကြီးပေမယ့် မေ့ပြီး ကျန်သွားတဲ့ အချက်မျိုးတွေ ရှိတတ်လို့ပါ။ ဒါတွေအပေါ်မှာ ဆင်ခြင်သုံးသပ်ပြီးတော့မှ အခုလာမယ့်နှစ်သစ် (၂၀၁၆) မှာ
ဘာတွေ လုပ်မယ်ဆိုတာတွေကို ထိထိရောက်ရောက် ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်မှာမို့ပါ။
၂၀၁၅ တွင် လုပ်ခဲ့တာများ
၁။ မြန်မာ့အိပ်မက် (လူငယ် တိုးတက်ရေး မဂ္ဂဇင်း) – ၂ တွဲ – အခမဲ့ စီစဉ်ဖြန့်ဝေပေးခြင်း၊
၂။ ရေဘေးသင့် ပြည်သူများအတွက် ”ကြယ်ငါး ကောက်သူများ” ပရဟိတအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းပြီး ကူညီလှုဒါန်းနိုင်ခဲ့ခြင်း၊
၃။ ActiveReaders စာဖတ်အသင်း ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့ခြင်း၊
၄။ ActiveEnglish စကားပြော သင်တန်းကို ပိုမိုကျယ်ဝန်းသော သင်တန်းနေရာသစ်သို့ ပြောင်းရွှေ့ ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ခြင်း၊ သင်တန်း Facebook page, Websites, Mobile Apps, Ebooks များကို လူသုံးပိုများလာအောင် လုပ်နိုင်ခြင်း၊
၅။ Online/ Social Media Marketing Project အချို့ အကြံပေး၊ ဝန်ဆောင်မှု ပေးနိုင်ခဲ့ခြင်း၊
၆။ ရေရှည်အလားအလာရှိသည့် လုပ်ငန်း ၁ ခုမှာ ရှယ်ယာထည့်ဝင်ခြင်း၊
၇။ ၁ နှစ်တာ ရည်မှန်းဝင်ငွေထက် ကျော်လွန်အောင် လုပ်ကိုင်နိုင်ခဲ့ပြီး တစ်သက်တာ ရည်မှန်းဝင်ငွေ၏ ၂.၅ ရာခိုင်နှုန်း ရရှိအောင် လုပ်ကိုင်နိုင်ခဲ့ခြင်း၊
၈။ လူငယ်တစ်ယောက်ကို ထိထိရောက်ရောက် ကူညီနိုင်ရန် ကြိုးစားသည်။ မအောင်မြင်၊ သို့သော် မရှုံး။ နည်းနည်းလေးတော့ ကောင်းကျိုး သက်ရောက်မှု ရှိခဲ့သည်။ လူလတ်ပိုင်းတစ်ယောက်ကို ထိထိရောက်ရောက် ကူညီနိုင်ရန် ကြိုးစားသည်။ မအောင်မြင်သည့်အပြင် အတော်လေးရှုံးသည်။ နောက်လူတစ်ယောက်ကို ထပ်ကူညီချင်စိတ် မရှိတော့လောက်အောင် ဖြစ်သွား၍ အတော်လေး ကိုယ့်စိတ်ကိုယ်ကို ပြန်ပြင်လိုက်ရသည်။
၉။ ပခုက္ကူ Barcamp မှာ၊ Global Enchanting သင်တန်းမှာ ”လူငယ်တွေအတွက် ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး တိုးတက်ရေး မိတ်ဆက်“၊ ”ဘဝ ပန်းတိုင် ဘယ်လိုချမှတ်မလဲ” စသည့် အကြောင်းအရာများဖြင့် လူငယ်တိုးတက်ရေးအတွက် ဟောပြောဆွေးနွေးပေးနိုင်ခဲ့သည်။
အပေါ်က အချက်တွေပေါ်မှာ မူတည်ပြီး ဒီလိုမျိုး အစီအစဉ်တွေ ဆက်ပြီး ဆွဲလို့ ရပါတယ် ။ 🙂
လက်ရှိ လုပ်နေဆဲနှင့် ၂၀၁၆ တွင် လုပ်စရာများ
၁။ မြန်မာ့ အိပ်မက် (လူငယ်တိုးတက်ရေး မဂ္ဂဇင်း) – ၂ တွဲ – အခမဲ့ စီစဉ်ဖြန့်ဝေပေးနိုင်ရမည်။ ကိုယ့်ထူးကိုယ်ချွန် လူငယ်၊ လူလတ်ပိုင်းတို့၏ စာမူ၊ အင်တာဗျူးများ ပါဝင်ရမည်။
၂။ ”ကြယ်ငါး ကောက်သူများ” ပရဟိတအဖွဲ့ကို ပြန်လည်စုစည်းပြီး ပညာရေး ဆိုင်ရာအတွက် ငွေကြေးနှင့် စနစ်ကောင်း လိုအပ်နေသူများကို အထောက်အပံ့ပေးနိုင်အောင် ကြိုးစားမည်။
၃။ ActiveReaders စာဖတ်အသင်းကို ပိုမိုထိရောက်စွာ လှုပ်ရှားလာစေရန် ကြိုးစားမည်။ ၂၀၁၆ အတွင်း အနည်းဆုံး ၃ ကြိမ် လူချင်း တွေ့ဆုံဆွေးနွေးနိုင်အောင် စီစဉ်မည်။
၄။ ActiveEnglish သင်တန်းကို ယခုထက် ပိုမိုအောင်မြင်အောင် လုပ်ရမည်။ Quality Control များ ထပ်တိုးမည်။ Traditional and Online Learning ချိတ်ဆက်မှု ပိုမိုအားကောင်းလာအောင် လုပ်မည်။ နောင် သင်တန်း ချဲ့ထွင်နိုင်ရန် ကြိုတင်၍ စေတနာနှင့် အရည်အချင်း ပြည့်ဝသော ဆရာကောင်းများ ရှာမည်။
၅။ Online/ Social Media Marketing Project များ၊ အခြားလူများအား ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်းကို ပုံမှန်အတိုင်း ထိန်းထားပြီး ကိုယ့်အဖွဲ့အစည်းနှင့် လက်ရှိ Clients များအတွက်သာ ဦးစားပေး လုပ်မည်။
၆။ အလားအလာရှိသည့် နောက်ထပ် လုပ်ငန်း ၁ ခု ကို ရှယ်ယာထည့်မည်။ (အများဆိုင် ရှယ်ယာကို ဗဟုသုတ သဘောထက် ပို၍မဝယ်။ မရင်းနှီးရန်။)
၇။ ကိုယ်ပိုင် လုပ်ငန်းသစ်တစ်ခု/ ဝင်ငွေ လမ်းကြောင်းသစ်တစ်ခု ကြိုးစားထူထောင်မည်။
၈။ တစ်နှစ်တာ ခန့်မှန်းဝင်ငွေပမာဏကို —– သို့ တိုးမြှင့်ပြီး တစ်သက်တာ ရည်မှန်းဝင်ငွေ၏ ——– ရာခိုင်နှုန်းသို့ ရောက်အောင်ကြိုးစားမည်။
၉ ။ လူငယ်တစ်ယောက်ကို ထပ်ကူညီမည်။
၁၀။ နောင် ရေးမည့် စာအုပ် ၂ အုပ် (English ဘာသာစကား ဆိုင်ရာနှင့် လူငယ်တိုးတက်ရေး လမ်းညွှန်) အတွက် အချက်အလက်များ၊ အတွေးအခေါ်၊ အတွေ့အကြုံ နှင့် စာစုများ ကြိုတင်စုဆောင်းထားမည်။
ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ဒီအချက်တွေကို အပေါ်က ၂၀၁၅ မှာ လုပ်ခဲ့တာတွေနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့တစ်သက်စာ တန်ဖိုး၊ စံသတ်မှတ်ချက်တွေအပေါ်မှာ မူတည်ပြီး အစီအစဉ် ဆွဲလိုက်တာပါ။
စိတ်အေးအေးထားပြီး လုပ်လိုက်ရင် ဒီအဆင့်လေးက ဘာမှမခက်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် မိမိဘဝရဲ့ လားရာလမ်းကို အမြဲမပြတ် ထိထိရောက်ရောက် စောင့်ကြည့်နိုင်တဲ့နေရာမှာ အလွန်ထိရောက်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် စာဖတ်သူများလည်း ဒီအဆင့်လေးကို သေသေချာချာ ပြတ်ပြတ်သားသားလေး လုပ်ကြည့်ဖို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။
(ဒါတွေကို အသေးစိတ် ရေးနေတယ်ဆိုတာ ကျွန်တော့်ကို အထင်ကြီးစေချင်လို့ သက်သက်မဟုတ်ပါ။ ကိုယ်ရည်သွေးပြီး ဒါတွေရေးနေတာ မဟုတ်ပါ။ လက်တွေ့ဆန်ဆန်မဟုတ်ဘဲ သီအိုရီတွေ လေသံကြား တရားနာ ပြန်ပြောနေတယ်ထင်ပြီး တန်ဖိုးမထားမှာ စိုးလို့ပါ။ သဘောတရား အကြမ်းဖျဉ်းလောက်လေးပဲ သိပြီး တကယ်လိုက်မလုပ်တတ်မှာ စိုးလို့ပါ။ စာဖတ်သူတွေ ကိုယ့်ကို အထင်ကြီးစေချင်စိတ်၊ အသိအမှတ်ပြုခံချင် စိတ်လည်း နည်းနည်းတော့ပါတယ်ဆိုတာ ဝန်ခံပါရစေ… 😀)
အခု တတိယအဆင့်အနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ လုပ်သင့်တာကတော့ အတတ်ပညာ တစ်ခုခုကို သေသေချာချာ လေ့လာ၊ လေ့ကျင့်ဖို့ … ကျွမ်းကျင်အောင် လုပ်ဖို့ပါပဲ။
”လက်ရှိ လုပ်နေတာတွေကိုပဲ ထပ်ထပ်လုပ်နေရင် လက်ရှိ ရလာဒ်တွေပဲ ထပ်ထပ်ရနေလိမ့်မယ်။ လက်ရှိ အနေအထားထက် ပိုကောင်းတဲ့ ရလာဒ်တွေကို လိုချင်ရင် လက်ရှိထက် ပိုကောင်းစေမယ့် အရာတွေကို လုပ်” ဆိုတဲ့ စကားတစ်ခွန်း ရှိပါတယ်။
ရုတ်တရက်တော့ ”ဒါလေးများ သိသားပဲ” လို့ ထင်စရာရှိပေမယ့် တကယ်တမ်းကျတော့ လက်တွေ့ လိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်ဖို့ဆိုတာ ထင်သလောက်၊ပြောသလောက် မလွယ်ဘူးဆိုတာကို ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်ကြည့်လိုက်ရင်၊ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်ကို ပြန်ကြည့်လိုက်ရင် အထင်းသား သိနေ၊ မြင်နေရမှာပါ။ ဒါကြောင့် အတတ်ပညာ အသစ်အသစ်တွေကို လေ့လာလေ့ကျင့်နေဖို့၊ ဒါမှမဟုတ် သိပြီး တတ်ပြီးသား အရာတွေကိုလည်း ပိုမိုကျွမ်းကျင်အောင် လေ့လာလေ့ကျင့်နေဖို့ အစီအစဉ် ဆွဲထားသင့်ပါတယ်။
ရုံးသုံး Softwares တွေကို ကျွမ်းကျင်ဖို့၊
ကွန်ပျူတာ၊ ဖုန်းကို အခုထက်ပိုပြီး ထိထိရောက်ရောက် ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင်ဖြစ်အောင် သုံးတတ်ဖို့၊
Website တစ်ခု၊ Mobile Application တစ်ခု ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် ရေးနိုင်ဖို့၊
ရေကူး ဒါမှမဟုတ် အားကစား တစ်ခုခုမှာ ကျွမ်းကျင်ဖို့၊
လူရှေ့သူရှေ့ စကားပြော ကျွမ်းကျင်ဖို့၊
ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းတဲ့ နေရာမှာ ကျွမ်းကျင်ဖို့၊
အရောင်းပညာ၊ ဈေးကွက် ထိုးဖောက်ရေး ပညာမှာ ကျွမ်းကျင်ဖို့… စတဲ့
လောကီဆိုင်ရာ ကိစ္စတွေသာမက ဘာသာရေးနယ်ပယ်နဲ့ ပိုမိုဆက်စပ်မှုရှိတဲ့ မိမိစိတ်ကို ထိမ်းချုပ်ပဲ့ပြင်ရာမှာ ကျွမ်းကျင်ဖို့
သမာဓိ ထူထောင်ရာမှာ ကျွမ်းကျင်ဖို့ စတာတွေလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အဓိက,ကတော့ မိမိရဲ့ တန်ဖိုး၊ စံ သတ်မှတ်မှု၊ ချမှတ်ထားတဲ့ ပန်းတိုင်တွေနဲ့ ကိုက်ညီမှု ရှိပြီး အဲ့ဒီအရာတွေကို ရရှိအောင် ဆောင်ကျဉ်းပေးနိုင်မယ့် အသိပညာ၊ အတတ်ပညာတွေကို ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်မှုရှိအောင် လေ့လာလေ့ကျင့်နေဖို့ အဓိက ပါပဲ။
ဒီတော့ ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ လာမယ့်နှစ်သစ်မှာ ဘယ်လို အရည်အချင်းတွေ တိုးပွားလာအောင် လုပ်မယ်၊ ဘယ်လို အတတ်ပညာတွေကို ကျွမ်းကျင်အောင် လုပ်မယ်ဆိုတာကိုလည်း သေချာစဉ်းစားပြီး ဆုံးဖြတ်ချက် ချသင့်ပါတယ်။
စာအုပ်တွေ၊ အသံ နဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်တွေကနေ တဆင့် လေ့လာသင်ယူမယ်။
ကျွမ်းကျင်သူတွေကို မေးမြန်းပြီး လေ့လာသင်ယူမယ်။
ဟောပြောပွဲ၊ ဆွေးနွေးပွဲတွေကို တက်ရောက်ပြီး လေ့လာသင်ယူမယ်။
သင်တန်းတွေ တက်ရင်း လေ့လာသင်ယူမယ်။
မိမိဘာသာမိမိ စမ်းသပ်လုပ်ကိုင်ရင်း လေ့လာသင်ယူမယ်။
စသဖြင့် လေ့လာသင်ယူနိုင်မယ့် နည်းလမ်းတွေကို စဉ်းစားပြီး ကိုယ်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ နည်းလမ်းတွေကို ရွေးချယ်ပြီး စုပေါင်းစပ်ပေါင်း အသုံးချ သင့်ပါတယ်။
အဆင့် ၄ အနေနဲ့ကတော့ ကျွန်တော်တို့ အနေနဲ့ ခပ်ဝေးဝေးကို ကြည့်ထားသလို အနီးဆုံးကိုလည်း ပြန်ကြည့်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
လူသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အခြေခံ လိုအပ်ချက်တွေက ဘာတွေလဲ? ဒါတွေကိုရော ကျွန်တော်တို့ ပြည့်စုံအောင် စွမ်းဆောင်နိုင်ပြီးပြီလားဆိုတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်လည်ဆန်းစစ်သင့်ပါတယ်။
ရုတ်တရက် ဖြစ်လာမယ့် ဘေးဒုက္ခတွေကို တောင့်ခံနိုင်လောက်တဲ့ အရန်ငွေအင်အား စုဆောင်းထားပြီးပြီလား?
သက်တောင့်သက်သာ နေထိုင်နိုင်တဲ့ဘဝ၊ လူနေမှုပုံစံကို ပိုင်ဆိုင်ထားပြီလား?
ချစ်သူ၊ ဇနီး၊ ခင်ပွန်း၊ သား၊ သမီးတွေနဲ့ရော အဆင်ပြေကောင်းမွန်တဲ့ ဆက်ဆံရေး ရှိပါရဲ့လား?
မိမိကို လူအများက ချစ်ခင်လိုလားကြပါရဲ့လား? အသိအမှတ်ပြုကြပါရဲ့လား?
မိတ်ကောင်း၊ ဆွေကောင်း ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်း ရှိပါရဲ့လား?
မိမိကိုးကွယ်တဲ့ ဘာသာရေးအရရော မိမိဘဝက လုံခြုံစိတ်ချရပြီလား?
စတဲ့ မေးခွန်းတွေကို ကိုယ့်ကိုယ်ကို သေချာ ပြန်မေးကြည့်သင့်ပါတယ်။ ပြီးရင်တော့ လိုအပ်နေတာတွေကို ထပ်မံရရှိအောင် ကြိုးစားဖို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီး အစီအစဉ်ဆွဲသင့်ပါတယ်။
နောက်ထပ် အဆင့် ၅ အနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ လုပ်သင့်တာကတော့ ကျွန်တော်တို့မှာရှိတဲ့ အချိန်၊ ငွေ၊ အင်အားနဲ့ တတ်ကျွမ်းမှုတွေကို အကောင်းဆုံး စီမံခန့်ခွဲနိုင်အောင် ပြင်ဆင်ဖို့ပါပဲ။
ဘယ်အလုပ်တွေကို အချိန်ပိုပေးပြီးတော့ ဘယ်ဟာတွေကိုတော့ အချိန်လျှော့သုံးမယ်။
ဘယ်အရာတွေအတွက် ငွေကို ပိုသုံး၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပြီးတော့ ဘယ်နေရာတွေမှာတော့ လျှော့သုံးမယ်။
ကိုယ့်ရဲ့ အင်အားအရှိဆုံးအချိန်မှာ ဘယ်အရာတွေကို ဦးစားပေး လုပ်ကိုင်ပြီးတော့ သာမန်နဲ့ အားနည်းနေချိန်မှာ ဘယ်အရာတွေကို လုပ်ကိုင်မယ်။
ကိုယ့်ရဲ့ အသိပညာ၊ အတတ်ပညာကို ဘယ်လိုအထိရောက်ဆုံးဖြစ်အောင် အသုံးချမယ်
စသဖြင့် ကျွန်တော်တို့ စဉ်းစားဆုံးဖြတ်စီမံရမှာပါ။ ကဏ္ဍတစ်ခုချင်းအလိုက် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အချိန်ယူပြီး စဉ်းစားစီမံရမှာပါ။ တစ်ခါ သေချာလုပ်ဖူးရင်တော့ နောက်အခါတွေ လုပ်တဲ့အခါ ပိုပြီး သက်သာလွယ်ကူသွားမှာပါ။ သာမန်ထက်ပိုပြီးထူးချွန်သူများ၊ အဖွဲ့အစည်း တစ်ခုခုကို ခေါင်းဆောင်နေသူများကတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသာမက ကိုယ်နဲ့အလုပ်တွဲလုပ်နေသူတွေကိုပါ အကောင်းဆုံး စီမံခန့်ခွဲနိုင်အောင် ပြင်ဆင်ရမှာပါ။
အဆင့် ၆ အနေနဲ့ လုပ်သင့်တာကတော့ တကယ်အရေးကြီးပါတယ်။ ခုနက အချက်တွေကို ရေရှည်အကျိုးဖြစ်ထွန်းစေနိုင်မယ့် အဓိကအဆင့် ဖြစ်နေလို့ပါ။
”မိမိမှာရှိတဲ့ အလေ့အကျင့်ဆိုးတွေကို အောင်မြင်ပျော်ရွှင်သူများရဲ့ အလေ့အကျင့်ကောင်းများ ဖြစ်လာအောင် မွေးမြူလေ့ကျင့်ပြီး အစားထိုး ကျင့်သုံးဖို့ပါ။“
အပြောင်းအလဲကောင်းတစ်ခုဆိုတာ လွယ်လွယ်နဲ့တော့ ရလေ့သိပ်မရှိပါဘူး။ ဆိုးရွားတဲ့ အပြောင်းအလဲတစ်ခု ဖြစ်လာဖို့ အတော်လေး လွယ်ကူပေမယ့် ကောင်းမွန်တဲ့ အပြောင်းအလဲတစ်ခု ရရှိလာဖို့ဆိုတာ အတော်လေးကို ဖိဖိစီးစီး လုပ်ရတာမျိုးပါ။
၁။ ပြောင်းသင့်တယ်လို့ သိရတယ်။
၂။ ပြောင်းရဲဖို့ သတ္တိ ရှိရတယ်။
၃။ ပြောင်းကို ပြောင်းမယ်လို့ ခိုင်မာတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက် ချရမယ်။
၄။ ဘယ်လိုအဆင့်ဆင့် ပြောင်းမလဲ စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ရမယ်။
၅။ တစ်ဆင့်ချင်းကို သေသေချာချာ အကောင်အထည်ဖော်သွားရမယ်။
၆။ လိုအပ်သလို ပြန်လည်ဆန်းစစ်နေရမယ်။
၇။ ရေရှည် စွဲစွဲမြဲမြဲ လုပ်ကိုင်ရမယ်။
စတဲ့ အဆင့် ၇ ဆင့်ကို သေသေချာချာ ဖိဖိစီးစီးလုပ်နိုင်မှ ကောင်းမွန်တဲ့ အပြောင်းအလဲတစ်ခုကို ရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာပါ။
ဒီ ၇ ဆင့်မှာမှ အရေးအကြီးဆုံးနဲ့ လူအများစု ကျဆုံးမှု အများဆုံးဖြစ်လေ့ရှိတဲ့နေရာကတော့ (ကျွန်တော့်အမြင်) အဆင့် ၇ – ရေရှည် စွဲစွဲမြဲမြဲ လုပ်ကိုင်ဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီလို ရေရှည် စွဲစွဲမြဲမြဲ လုပ်ကိုင်နိုင်ဖို့ကို သီးသန့်တကူးတကအနေနဲ့ မဟုတ်ဘဲ အလေ့အကျင့်တစ်ခုအနေနဲ့ ကူးပြောင်းနိုင်အောင် ကြိုးစားစေချင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ အလုပ်တစ်ခုကို လုပ်သင့်လို့ဆိုပြီး ရံဖန်ရံခါ ထလုပ်တာထက် အကျင့်ဖြစ်ပြီး ပုံမှန်လုပ်နေတာမျိုးက ပိုပြီးအများကြီး သက်သာပါတယ်။ အကျင့်ရနေတယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အင်အားအများကြီး စိုက်ထုတ်ရတယ်လို့ မထင်တော့ဘဲ ပိုပြီးပေါ့ပေါ့ပါးပါး လုပ်နိုင်လာလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါဆိုရင် ဒီအလုပ်ကို ရေရှည်လုပ်ဖြစ်ဖို့ အတော်လေး လွယ်သွားပါပြီ။
စာဖတ်သူက ပျင်းတတ်သူဆိုရင် မပျင်းတတ်တဲ့ အကျင့်ရအောင် မွေးယူပါ။
စာဖတ်သူက နေ့ရွှေ့ ညရွှေ့ လုပ်တတ်သူဆိုရင် လုပ်သင့်တဲ့အလုပ်ကို လုပ်သင့်တဲ့အချိန်မှာ ထ,လုပ်တတ်တဲ့ အကျင့်ရအောင် မွေးယူပါ။
စာဖတ်သူက အရက်၊ ဘီယာ၊ ဆေးလိပ်တို့ကို မိမိရဲ့ ကျန်းမာရေး၊ ငွေကြေး၊ ဆက်ဆံရေး ထိခိုက်လာက်အောင် သုံးစွဲတတ်သူဆိုရင် ဒါတွေကို လျှော့ချနိုင်အောင် အကျင့်လုပ်ပါ။ မသုံးစွဲဘဲ နေနိုင်အောင် အကျင့်လုပ်ပါ။
စာဖတ်သူက စာကောင်း၊ ပေကောင်း ဖတ်ကျင့် နည်းနေရင် စာဖတ်ကျင့်များလာအောင် လုပ်ပါ။
စာဖတ်သူက အပြောပဲသန်ပြီး နားမထောင်တတ်ရင် လူအများဆီက နားထောင်သင်ယူတတ်အောင်လည်း လုပ်ပါ။
စာဖတ်သူက အောင်မြင်သူတွေကို မနာလိုစိတ် များလွန်းရင် သူတို့ကို အားကျပြီး သူတို့ဆီက ကောင်းတာလေးတွေ ရွေးယူတတ်တဲ့ အကျင့်ရအောင် လုပ်ပါ။
စာဖတ်သူက ကိုယ့်အတွက်ကိုယ်ပဲ ကြည့်လေ့ရှိတယ်ဆိုရင် အများအကျိုးလေးလည်း နည်းနည်းလောက် မျှပြီးလုပ်နိုင်တဲ့ အကျင့်ရအောင် မွေးယူပါ။
ဒီကိစ္စတွေက ရေးရ၊ ဖတ်ရတာသာ လွယ်တာပါ။ တကယ်လုပ်ကြည့်ရင် အတော်လေး ဇွဲကောင်းမှ ဖြစ်တာပါ။ စာရေးသူ ကျွန်တော်လည်း အကုန်မလုပ်နိုင်သေးပါ။ အချိန်တိုင်း လေ့လာသင်ယူ အလေ့အကျင့် လုပ်နေရဆဲပါ။ ဒါပေမယ့် ခိုင်မာတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီး မဖြစ်ဖြစ်အောင် လုပ်မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ လုပ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ တခြား အောင်အောင်မြင်မြင် လုပ်နေတဲ့လူတွေရှိလို့ ကျွန်တော်လည်း လုပ်နိုင်မယ်လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်ပါတယ်။ ကျွန်တော် လုပ်နိုင်သလို စာဖတ်သူလည်း လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့အားလုံး လုပ်နိုင်ကြပါတယ်။ အခုပဲ မရရအောင် လုပ်မယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပါ။ 🙂
ကဲ အခုကတော့ နောက်ဆုံးပိတ် အိတ်နဲ့လွယ်မယ့် အဆင့် ၇ ပါ။
ခုနက အပေါ်မှာ ကျွန်တော် တောက်လျှောက်ရေးလာတဲ့ အဆင့် ၆ ဆင့် လုံးဟာ အပြောလွယ်၊ အရေးလွယ်သလောက် လက်တွေ့ ကောင်အထည်ဖော်ရာမှာ အတော်လေး ခက်လှတာပါ။ ဒီအဆင့်တွေကို ဖတ်ကြည့်ပြီး ဒီလောက်တောင် လုပ်စရာတွေများလှတာ မလွယ်ပါဘူး။ မလုပ်တော့ပါဘူးကွာ။ ငါ့ဘာသာငါ အေးအေးဆေးဆေး သက်တောင့်သက်သာပဲ နေပါတော့မယ်လို့ တွေးမိတာမျိုး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ လုပ်သင့်တယ်လို့ ဦးနှောက်က လက်ခံလိုက်ရင်တောင် လုပ်ကိုလုပ်မယ်လို့ ခိုင်မာတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက် ချနိုင်ဖို့ခက်ပါတယ်။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးလို့ အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ ကြိုးစားရင်း လမ်းခုလတ်မှာ ဘယ်လိုဆက်လုပ်လို့လုပ်ရမှန်း မသိတော့တာမျိုးလည်း ဖြစ်နိုင်ပါသေးတယ်။ ဖြစ်လည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ (ကျွန်တော့် အနေနဲ့လည်း ဒီစာစုလေးထဲမှာ အသေးစိတ်တွေ အကုန်ထည့်ရေးဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။)
နောက်တစ်ခုက ကျွန်တော်က ကျွန်တော် ဖတ်မှတ်လာတဲ့ အသိတွေ၊ ဖြတ်သန်းခဲ့ရတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေအရ ဆွေးနွေးတင်ပြပေးထားတာဖြစ်လို့ စာဖတ်သူတစ်ဦးချင်း၊ တစ်ယောက်ချင်းရဲ့ လက်ရှိအနေအထားနဲ့ ညှိယူတဲ့နေရာမှာ အခက်အခဲ ရှိနေတာမျိုးလည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒီလိုတွေများ ကြုံလာခဲ့သည်ရှိသော် အခု ကျွန်တော်ပြောမယ့် နောက်ဆုံးအချက်လေးကို အကောင်အထည် ဖော်စေချင်ပါတယ်။
”မိမိရဲ့ ဘဝအနေအထားကို သေချာ နားထောင်ပေးပြီး မိမိကို သေချာအကြံပေး၊ လမ်းညွှန်ပြသပေးနိုင်မယ့် ဆရာကောင်းတစ်ယောက် ရှာဖို့ပါ။
(ဒါမှမဟုတ်) မိမိလိုမျိုး လုပ်ချင်တဲ့ အကြံတူ၊ ပန်းတိုင်တူသူများ စုဝေးရာ အသင်းအဖွဲ့တစ်ခုကို ရှာဖွေချိတ်ဆက်ဖို့၊ စုစည်းတည်ထောင်ဖို့ပါ။“
”ဆရာမပြ နည်းမကျ” ဆိုတဲ့ စကားဟာ အခုအချိန်ထိ မှန်နေဆဲပါ။ ဒီနေ့ခေတ်မှာ စာအုပ်တွေ၊ ဟောပြောပွဲတွေ၊ အသံနဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်တွေကနေ တဆင့် လေ့လာသင်ယူနေနိုင်ပြီ ဖြစ်ပေမယ့်လည်း ကိုယ့်ကို တစ်ဦးချင်း အချိန်ပေးပြီး ဆွေးနွေးအကြံပြု၊ သင်ပြပေးတဲ့ ဆရာသမားကောင်းတွေလောက်တော့ ထိရောက်မြန်ဆန်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကို ချက်ချင်းထောက်ပြနိုင်မယ့်၊ အားသာချက် အားနည်းချက်တွေကို ချက်ခြင်းသုံးသပ်ပေးနိုင်မယ့် ဆရာသမားကောင်းတစ်ယောက်သာ စာဖတ်သူမှာ ရှိခွင့်ရထားမယ်ဆိုရင် စာဖတ်သူဖြစ်ချင်တဲ့ ဆန္ဒတွေကို အကောင်အထည်ဖော်ရာမှာ ပိုပြီးလွယ်ကူမြန်ဆန်နိုင်မှာပါ။
ဒီလိုဆရာသမားဟာ လူတိုင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ စာဖတ်သူရဲ့ မိဘတွေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ စာဖတ်သူရဲ့ ဘာသာရပ်သင် ဆရာတွေလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ စာဖတ်သူ လေးစားအားကျရတဲ့ စာရေးသူ၊ ဟောပြောသူ တစ်ယောက်ယောက်လည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ အကူအညီ၊ အကြံဉာဏ်သာ ရလာခဲ့ရင် ကိုယ့်အတွက် တစ်အားပဲမို့ ရအောင် သေသေချာချာ လေးလေးစားစား ကြိုးစားသင့်ပါတယ်။ မိဘ၊ ဆွေမျိုးဆိုရင် သိပ်ပြဿနာမရှိပေမယ့် သူစိမ်းတစ်ယောက်ယောက်ဆီက အကူအညီယူတော့မယ်ဆိုရင် ပိုပြီးသတိထားရပါမယ်။ ကိုယ့်ကို အကူအညီပေးမယ့် လူတစ်ယောက် ကူညီချင်စိတ်ပေါက်အောင် ပြောတတ်ဆိုတတ် ဆက်ဆံတတ်ရပါမယ်။
”ကျွန်တော် ခင်ဗျားနဲ့ စကားပြောချင်လို့။ ကျွန်တော်အားတဲ့ ဒီအချိန်မှာ ခင်ဗျားနဲ့ တွေ့လို့ရမလား?“
(တကယ်က ကိုယ့်ဆရာဖြစ်လာမယ့်လူ ဘယ်အချိန်အားလဲ? ပေးနိုင်လဲ? ဆိုတာကို တလေးတစား အရင်မေးရမှာ)
”ကျွန်တော် မေးနေတာ၊ မေးထားတာ ကြာပြီလေ။ ခင်ဗျားက ဘာလို့မဖြေပေးသေးတာလဲ?“
(လူတိုင်းက ဝင်လာသမျှ ထိုင်ဖြေပေးနေရလောက်အောင် မအားတတ်ကြပါဘူး။ အထူးသဖြင့် စာဖတ်သူက အကူအညီ၊ အကြံဉာဏ် တောင်းရလောက်အောင် အနေအထားတစ်ခု ရောက်နေတဲ့လူဆိုရင် ပိုပြီး မအားပါဘူး။ ကိုယ့်ဖက်က စိတ်ရှည်ရပါမယ်။ တလေးတစား မေးရပါမယ်။ ကိုယ်က လိုချင်တဲ့လူ ကိုး…)
ဒါတွေကို အသေးစိတ် လိုက်ရေးနေရတာ၊ ကျွန်တော် ရေးထားတာကို ဖတ်နေရတာ စာဖတ်သူ တချို့အတွက်တော့ ရယ်စရာ ကောင်းနေပါလိမ့်မယ်။ တချို့ ဒီလောက်တောင် မသိတဲ့ လူငယ်၊ လူလတ်ပိုင်းတွေ တကယ်ရှိနေလို့၊ ကိုယ်တွေ့ ခဏခဏကြုံခဲ့ဖူးလို့ ဒီလောက် သေချာလိုက်ပြီး ပြောပေးနေရတာပါဗျာ။
ကျွန်တော်တို့တုန်းက အဲ့လိုဆရာမျိုး ကြုံခွင့် သေချာမရလိုက်ပါဘူး။ ဟိုဆရာဆီက နည်းနည်း၊ ဒီဆရာဆီက နည်းနည်း ကြုံသလို သင်ယူခဲ့ရတာပါ။ အများအားဖြင့်တော့ စာအုပ်တွေ၊ ဟောပြောပွဲတွေ၊ အသံနဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်တွေကနေတဆင့် လေ့လာသင်ယူခဲ့ရတာ ပိုများပါတယ်။ တကယ်တမ်းတော့ ဒီလို တစ်ဦးချင်း ဆွေးနွေးသင်ယူခွင့်သာ ရခဲ့မယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့အတွက် အချိန်တွေ၊ အင်အားတွေ အချည်းနှီး မဖြစ်တော့ဘဲ ပိုပြီးထိထိရောက်ရောက် အောင်အောင်မြင်မြင် စွမ်းဆောင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ အလှည့်တုန်းက မရခဲ့တဲ့အရာတစ်ခုကို လူငယ်တွေအတွက် တတ်စွမ်းသလောက် ပြန်ပေးနိုင်အောင် ကျွန်တော် ကြိုးစားပါတယ်။ အကြံဉာဏ်၊ အကူအညီများ လိုလာခဲ့ရင် ကျွန်တော့်ဖက်က အမြဲတံခါးဖွင့်ပေးထားပါတယ်။ တစ်ခုတော့ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့အချိန်နဲ့ အင်အားဟာ အကန့်အသတ်ရှိတဲ့အတွက် လာတောင်းသမျှ လူကိုတော့ ကျွန်တော် အကူအညီပေးနိုင်ဖို့ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ (ဒါကြောင့် အများအတွက် ဆိုရင် ကျွန်တော် ဒီလိုစာမျိုးတွေ ရေးတင်တာကိုပဲ အဓိက လုပ်ပေးလေ့ရှိပါတယ်။)
အကူအညီ လာတောင်းတဲ့လူဟာ ဘယ်လောက်အထိ စိတ်အားထက်သန်မှု ရှိသလဲ?
တကယ်လိုက်လုပ်မယ့် လူလား? အပျင်းပြေ လာနားထောင်ချင်တာလား?
တကယ်သိချင်တာလား? ပညာလာစမ်းချင်တာ၊ ဦးနှောက် လာဖောက်စားချင်တာ သက်သက်လား?
ကျွန်တော်ပေးလိုက်တဲ့ အကြံဉာဏ်တွေကို အများကောင်းကျိုးအတွက် လုပ်သွားမယ့် လူမျိုးလား?
ကိုယ့်အတွက်ပဲကောင်းပြီး အများအကျိုးယုတ်အောင် လုပ်သွားမယ့် လူမျိုးလား?
လူတစ်ယောက်က အကူအညီ တောင်းလာတဲ့အခါမှာ ကျွန်တော့်ရဲ့ ပိုလျှံအချိန်၊ ငွေနဲ့ အင်အားက သူ့ကိုကူညီဖို့ အဆင်ပြေရဲ့လား?
စတာတွေကို ကျွန်တော် စဉ်းစား ချိန်ထိုးပြီးမှ ကျွန်တော် ကူညီနိုင်မှာပါ။ လူတွေကို လျှာဖျားအေးနဲ့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေး ကူညီနေပါတယ်။ ကူညီနေပါတယ်လို့ ကျွန်တော် မပြောချင်လို့ပါ။ လုပ်ခွင့်ရလို့ လုပ်မယ်ဆိုရင် ထိထိရောက်ရောက် ဖြစ်အောင်ပဲ လုပ်ချင်ပါတယ်။
စာဖတ်သူက တကယ်ကို ကြိုးကြိုးစားစား ရှာပေမယ့် ခုနကလို ကိုယ့်ကို လမ်းပြမယ့် ဆရာသမားကောင်းမျိုး ရှာမတွေ့ဘူး၊ ဒါမှမဟုတ် တော်ရုံလူလောက်ကို ဆရာမတင်ချင်တာနဲ့ပဲ စိတ်တိုင်းကျဆရာကို ရှာမတွေ့သေးဘူး ဆိုတာမျိုးလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဖြစ်တတ်ပါသေးတယ်။ (စကားစပ်မိလို့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဝန်ခံရရင် ကျွန်တော့်ဘဝ အတိုင်းအတာတစ်ခုမှာ တန့်နေတာ၊ ရေကုန် မီးကုန် မတိုးတက်သေးတာ အဲ့လိုမာန်မျိုး ခံနေလို့ပါ။ ကျွန်တော်က ဆရာရွေးတဲ့ နေရာမှာ သိပ်ကို အကဲဆတ်တတ်ပါတယ်။ လူတစ်ယောက်ကို တစ်ခုခု မကြိုက်တော့ဘူးဆိုရင် လေးစားဖို့၊ လိုအပ်တဲ့နေရာမှာ ဆရာတင်လိုက်ဖို့၊ သူ့ရှေ့ရောက်ရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကို နှိမ့်ချတတ်ဖို့ အတော်လေးကို ကျွန်တော့်အတွက် ခက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီအကျင့်ဟာ သိပ်တော့ကောင်းတဲ့အကျင့်မျိုး မဟုတ်လို့ တတ်နိုင်သလောက် ကျွန်တော့်ကိုယ်ကျွန်တော် သတိထားပြီး ပြင်ယူနေရတာ အခုချိန်အထိပါပဲ။)
အဲ့လိုများ ဖြစ်လာခဲ့ရင် ကျွန်တော် အကြံပေးချင်တာက ကိုယ်နဲ့လားရာတူ၊ ပန်းတိုင်တူတဲ့ အသင်းအဖွဲ့တစ်ခုကို ရှာဖွေချိတ်ဆက်ဖို့ပါ။ အသင်းအဖွဲ့ တွေရဲ့ အားသာချက်က ဆရာ၊ တပည့် ဆိုတဲ့ ဆက်ဆံရေးမျိုး ထားစရာမလိုဘဲ အချင်းချင်း ရင်းရင်းနှီးနှီး ပေါ့ပေါ့ပါးပါး အသိပညာ ဗဟုသုတ၊ အတွေ့အကြုံတွေကို ဖလှယ်နိုင်တာပါ။ အသင်းအဖွဲ့တိုင်းမှာ ခေါင်းဆောင်ဆိုတာတွေ ရှိပေမယ့်လည်း ကိုယ်က သူတို့နဲ့ တိုက်ရိုက်မဆက်ဆံဘဲနဲ့တောင် ခုနကလို အသင်းသားအချင်းချင်း ဆွေးနွေးရာကနေ ပညာတွေ၊ အကြံဉာဏ်ကောင်းတွေ အများကြီး ရနိုင်ပါတယ်။ (ရေရှည်တော့ ဘယ်ကောင်းမလဲဗျာ။ အသင်းအဖွဲ့ကောင်းတစ်ခု ဖြစ်ဖို့ဆိုတာ လွယ်တာမဟုတ်လို့ ဒီလိုဖြစ်လာဖို့ အချိန်နဲ့ အင်အား စိုက်ထုတ်ပေးထားတဲ့ အဓိက မောင်းနှင်ပေးနေတဲ့ ခေါင်းဆောင်တွေကို ထိုက်သင့်တဲ့ လေးစားသမှုတော့ ပြုသင့်တာပေါ့။)
ကျွန်တော့်အနေနဲ့လည်း အဲလိုမျိုး လုပ်လေ့ရှိပါတယ်။ ကိုယ်က အခြားအသင်းအဖွဲ့တွေကို သွားချိတ်ဆက်တာမျိုး ရှိသလို ကိုယ်တိုင်က စုစည်းပြီး တည်ထောင်ပေးတာမျိုး လည်း ရှိပါတယ်။
အရင်က STG – Sharing Together Group ဆိုပြီး လူငယ် တိုးတက်ရေး၊ စီးပွားရေး အခွင့်အလမ်းရရှိရေးအတွက် အဖွဲ့လေးတစ်ခု လုပ်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ကျွန်တော့်ကိုယ်ပိုင်အလုပ်တွေကို ပိုပြီးအချိန်ပေးနိုင်အောင်လို့ အဖွဲ့အနေနဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေကို ရပ်ခဲ့ရပေမယ့် အခုအချိန်အထိ အဲ့ဒီအဖွဲ့ တည်ထောင်တုန်းက ရခဲ့တဲ့ မိတ်ကောင်းဆွေကောင်း တချို့နဲ့ အဆက်အသွယ် ရှိနေဆဲပါ။
အများအကျိုး လုပ်ဖို့ အတွက် ”ကြယ်ငါး ကောက်သူများအဖွဲ့“၊ လူငယ်တွေ စာဖတ်ပြီး အကျိုးရလာဒ်ကောင်းတွေရဖို့အတွက် ”ActiveReaders စာဖတ်အသင်း” စတာတွေကိုလည်း တည်ထောင်ပြီး အခုအချိန်ထိ ဖြည်းဖြည်းချင်းရွေ့အောင် တွန်းနေတုန်းပါပဲ။
ကျွန်တော် လူငယ်တွေ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး တိုးတက်ဖို့အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ထုတ်ဝေတဲ့ ”မြန်မာ့အိပ်မက်” မဂ္ဂဇင်း (https://www.myanmardreamer.com) အတွက်လည်း Fan Club ဖွဲ့ပေးပြီး တိုးတက်ချင်စိတ်ရှိတဲ့ လူငယ်တွေကို စုစည်းပေးသွားဖို့ အစီအစဉ် ရှိပါတယ်။
ဒီစာစုကို ရေးရတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကလည်း လူငယ်တွေ ဒီစာစုကနေရတဲ့ အတွေးအခေါ်တွေကို လက်တွေ့အသုံးချနိုင်ဖို့အပြင် အခုလို အသင်းအဖွဲ့လေးတွေကို တစ်ပိုင်တစ်နိုင် စုစည်းတည်ထောင်နိုင်ဖို့၊ အချင်းချင်း အချိတ်အဆက်မိသွားစေဖို့လည်း ရည်ရွယ်ပါတယ်။ ဒီစာစုကို ဖတ်ပြီး နှစ်သက်သူ၊ Comments ပေးသူ၊ Share ပေးကြသူ အချင်းချင်းလည်း ချိတ်ဆက်ပြီး ဒီအကြံဉာဏ်တွေကို လက်တွေ့ အသုံးချနိုင်ပါတယ်။
Online/Social Media လို နေရာမျိုးမှာ ဒီစာကို ဒီလောက်အထိ ဆုံးအောင်ဖတ်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာ လွယ်တာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်ဆိုရင်တောင်မှ ဒီလောက်စာ အရှည်ဆိုရင် အရင် Share/Save ထားပြီး နောက်မှ အေးအေးဆေးဆေး အချိန်ယူပြီး ပြန်ဖတ်မိဖို့ များပါတယ်။
တကယ်လို့များ စာဖတ်သူက ဒီနေရာအထိ စာကို ဖတ်ဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ ဝမ်းသာဂုဏ်ယူမိပါတယ်ဗျာ။ ဆရာမောင်ချောနွယ် ပြောခဲ့သလို ”ကျွန်တော်တို့ လမ်းတူလို့ လူချင်း တွေ့ခွင့်ရကြတယ်” လို့ ခံယူမိတာမို့ ဖြစ်နိုင်ရင် ဒီစာစုနဲ့ပတ်သက်ပြီး စာဖတ်သူရဲ့ အမြင်လေးကိုလည်း သိချင်ပါတယ်။ Comment/Message box မှာ တွေ့ကြမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ဖတ်ရတာ စုစုစည်းစည်း ပြန်ဖြစ်သွားအောင် ကျွန်တော် အကျယ်ရေးထားတဲ့ အဆင့် ၇ ဆင့်ကို ပြန်ပြီး စုစည်းပေးလိုက်ပါတယ်။
နှစ်တိုင်း ပြန်ဖတ်သင့်တဲ့ နှစ်သစ်ကူး သန္ဒိဋ္ဌာန် ချမှတ်နည်း (အဆင့် ၇ ဆင့်)
၁။ မိမိရဲ့ စံတန်ဖိုးများကို ပြန်လည်ဆင်ခြင်သတ်မှတ်ပါ။ တစ်နှစ်နဲ့ တစ်နှစ် ကိုယ့်ရဲ့အနေအထားတွေ၊ ပတ်ဝန်းကျင် အခြေအနေတွေ မတူတော့တာမျိုး ဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက် တန်ဖိုး၊ စံ သတ်မှတ်မှုတွေကိုလည်း လိုအပ်ရင် ပြောင်းလဲ သတ်မှတ်ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါမှ ဘယ်တန်ဖိုးကို ရယူဖို့အတွက် ဘယ်လောက်အချိန်နဲ့ အင်အား စိုက်ထုတ်မယ်ဆိုတာကို ထိထိရောက်ရောက် စီမံခန့်ခွဲနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
၂။ ဒီနှစ်အတွင်းမှာ လုပ်ခဲ့တာ၊ လုပ်နေတာတွေကို သေချာစုစည်းပါ။ ဒါတွေအပေါ်မှာ ဆင်ခြင်သုံးသပ်ပြီးတော့မှ အခုလာမယ့် နှစ်သစ် (၂၀၁၆) မှာ
ဘာတွေလုပ်မယ် ဆိုတာတွေကို ထိထိရောက်ရောက် ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါ။
၃။ အတတ်ပညာ တစ်ခုခုကို သေသေချာချာ လေ့လာ၊ လေ့ကျင့်ပါ။ ကျွမ်းကျင်အောင် လုပ်ပါ။
၄။ လူသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အခြေခံ လိုအပ်ချက်တွေက ဘာတွေလဲ? ဒါတွေကိုရော ကျွန်တော်တို့ ပြည့်စုံအောင် စွမ်းဆောင်နိုင်ပြီးပြီလားဆိုတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ပြန်လည်ဆန်းစစ်ပါ။
၅။ မိမိမှာရှိတဲ့ အချိန်၊ ငွေ၊ အင်အားနဲ့ တတ်ကျွမ်းမှုတွေကို အကောင်းဆုံး စီမံခန့်ခွဲနိုင်အောင် ပြင်ဆင်ပါ။ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုကို ခေါင်းဆောင်နေသူများကတော့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသာမက ကိုယ်နဲ့ အလုပ်တွဲလုပ်နေသူတွေကိုပါ အကောင်းဆုံး စီမံခန့်ခွဲနိုင်အောင် ပြင်ဆင်ရမှာပါ။
၆။ ”မိမိမှာ ရှိတဲ့ အလေ့အကျင့်ဆိုးတွေကို အောင်မြင်ပျော်ရွှင်သူများရဲ့ အလေ့အကျင့်ကောင်းများ ဖြစ်လာအောင် မွေးမြူလေ့ကျင့်ပြီး အစားထိုး ကျင့်သုံးပါ။“
၇။ ”မိမိရဲ့ ဘဝအနေအထားကို သေချာ နားထောင်ပေးပြီး မိမိကို သေချာ အကြံပေး၊ လမ်းညွှန်ပြသပေးနိုင်မယ့် ဆရာကောင်းတစ်ယောက် ရှာဖို့ပါ။ ဒါမှမဟုတ် မိမိလိုမျိုး လုပ်ချင်တဲ့ အကြံတူ၊ ပန်းတိုင်တူသူများ စုဝေးရာ အသင်းအဖွဲ့တစ်ခုကို ရှာဖွေ ချိတ်ဆက်ဖို့၊ စုစည်းတည်ထောင်ဖို့ပါ။“
( https://www.sharingkozinzae.com )
”ပန်းတိုင်တွေ့၍ တွေ့သောပန်းတိုင် အရောက်လှမ်းနိုင်ကြပါစေဗျာ“
Learning Life Balance စံတန်ဖိုး ဆရာဇင်ဇေလွင် ဆောင်းပါးများ သန္ဒိဋ္ဌာန်
Sammi December 15, 2021 at 8:59 PM
နှစ်တိုင်း ချမှတ်​ပေမယ့် ၂၀၂၂ အတွက်က​တော့
"အ​​ရေး​တော်ပုံ ​အောင်ဖို့" တစ်ခုထဲပဲ
Chu Zim December 15, 2021 at 9:19 PM
ချိုသာတဲ့ ညိုပြာ December 15, 2021 at 10:20 PM
ဒါပေမယ့် နိုင်ငံ့အရေးမှ မကောင်းသေးတော့
Maple December 15, 2021 at 10:28 PM
San Zuren December 15, 2021 at 10:43 PM
akkh December 17, 2021 at 1:16 AM
Nan Ni Ni December 21, 2021 at 9:54 PM
ချိုသာတဲ့ ညိုပြာ December 15, 2021 at 10:18 PM
Aung Maung December 16, 2021 at 12:19 AM
ချိုသာတဲ့ ညိုပြာ December 28, 2021 at 5:24 AM
ချိုသာတဲ့ ညိုပြာ December 30, 2021 at 6:17 PM
နောက်နေ့ကစပြီး လျော့တော့တာပဲ :'D
ဂျူနီယာ မင်းမင်း December 15, 2021 at 10:23 PM
FIGHT FOR FREEDOM ÖK
SanDar December 15, 2021 at 10:27 PM
Maple December 15, 2021 at 10:27 PM
အစကတည်းက လိပ်ပြာလုံလုံနဲ့ ပါဝင်ပြီး ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့လမ်းကို အဆုံးထိဆက်လျှောက်ကြမယ်
PPWK's click December 15, 2021 at 10:27 PM
Click click click for justice
moonlamin December 15, 2021 at 10:33 PM
မင်ယွန်းဂီရဲ့ကောင်မလေးမင်ယွန်းဂီရဲ့ကောင်မလေး December 15, 2021 at 10:45 PM
DONE ✅✅✅ zppa
Unknown December 15, 2021 at 10:46 PM
Tharsaw December 15, 2021 at 11:01 PM
THAR CHAW December 15, 2021 at 11:04 PM
Haruko Wie ☁ December 15, 2021 at 11:15 PM
ရန်မခ December 15, 2021 at 11:28 PM
Love you all clickers 😍😍
ချိုသာတဲ့ ညိုပြာ December 28, 2021 at 5:26 AM
ချိုသာတဲ့ ညိုပြာ December 30, 2021 at 6:15 PM
Candle December 15, 2021 at 11:29 PM
၂၀၂၂မှာ တည်ငြိမ်အေးချမ်းတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံ ဖြစ်စေရမည်
Nweni December 15, 2021 at 11:30 PM
Sai Min Oo December 16, 2021 at 12:09 AM
💪 done 😃
Aung Maung December 16, 2021 at 12:20 AM
PDFနဲ့ KNU အောင်မြင်ပါစေ
Aung Kyaw Hein December 16, 2021 at 12:38 AM
ေစာ(အဝါရောင်မြေ) December 16, 2021 at 12:39 AM
Zin Mar Htwe December 16, 2021 at 2:10 AM
Programmer Cruso December 16, 2021 at 2:43 AM
MyoOo December 16, 2021 at 2:58 AM
Unknown December 16, 2021 at 3:17 AM
ကလစ်တချက်စီတိုင်းက လိုအပ်​သော​နေရာများအတွက် ​အထောက်အပံ့ဖြစ်ပါ​စေ
Ei Ei Mon December 16, 2021 at 4:06 AM
Unknown December 16, 2021 at 4:57 AM
La Min December 16, 2021 at 5:21 AM
Pyae Pyae December 16, 2021 at 5:26 AM
Fedeforce December 16, 2021 at 5:38 AM
Fedeforce December 16, 2021 at 6:28 AM
Eliz4win December 16, 2021 at 6:47 AM
Aung December 16, 2021 at 7:09 AM
Nway Oo December 16, 2021 at 7:41 AM
aungwinthet December 16, 2021 at 8:12 AM
Wai yan lwin W-Y December 16, 2021 at 8:54 AM
Mon mon December 16, 2021 at 9:07 AM
Neon December 17, 2021 at 2:05 AM
Elrics December 17, 2021 at 2:44 AM
Dar Dar December 17, 2021 at 6:35 AM
AKM December 17, 2021 at 7:08 PM
RT December 17, 2021 at 7:31 PM
Bo kyaw December 18, 2021 at 2:38 AM
Su Su December 18, 2021 at 5:13 AM
Dar Dar December 18, 2021 at 6:07 AM
KhantGyi December 18, 2021 at 7:08 AM
TT December 18, 2021 at 8:30 AM
yoke soe December 18, 2021 at 7:05 PM
MT December 18, 2021 at 7:47 PM
KhantGyi December 18, 2021 at 9:36 PM
I boring at reading
Nilar December 18, 2021 at 10:11 PM
Fedeforce December 18, 2021 at 11:51 PM
great learning article
AKM December 19, 2021 at 4:07 AM
Chiyochiyo December 19, 2021 at 6:09 AM
AKM December 19, 2021 at 9:08 AM
Win the year
akkh December 19, 2021 at 5:49 PM
Mon mon December 20, 2021 at 12:38 AM
Mon mon December 20, 2021 at 12:53 AM
Jasmine December 20, 2021 at 2:24 AM
Thar Htwe December 20, 2021 at 7:37 PM
Ambitious and consistent are the keys.
Che December 24, 2021 at 7:09 AM
Unknown December 30, 2021 at 6:06 PM
Click Ko Ko December 30, 2021 at 6:12 PM
Unknown December 30, 2021 at 6:16 PM
စစ္ေခြးမ်ား အျမန္က်ဆုံး ပါေစး ျမန္မာျပည္ႀကီးအျမန္ဆုံးေအးခ်မ္းပါေစ
Unknown December 30, 2021 at 6:23 PM
Unknown December 30, 2021 at 6:51 PM
Unknown December 30, 2021 at 7:03 PM
Unknown December 30, 2021 at 7:11 PM
Unknown December 30, 2021 at 7:20 PM
KyiWinKhant December 30, 2021 at 7:21 PM
Unknown December 30, 2021 at 7:24 PM
သိန်း1သောင်းပြည့်ချင်ပါတယ်ဗျို့ 31, Done ❣️💪 fighting 💪
Unknown December 30, 2021 at 7:32 PM
Than Than December 30, 2021 at 7:34 PM
kaungmyatt December 30, 2021 at 7:45 PM
NAK December 30, 2021 at 7:53 PM
minm99762@gmail.com December 30, 2021 at 8:01 PM
Khine Moe December 30, 2021 at 8:05 PM
zaylatt December 30, 2021 at 8:06 PM
Han December 30, 2021 at 8:19 PM
Kyaw mae yaung December 30, 2021 at 8:22 PM
I am faကျော်မဲရောင်is my fb acc. 😁😁😁17old
Yamin December 30, 2021 at 8:25 PM
Thwet Khaing December 30, 2021 at 8:26 PM
We are clickers
Mc December 30, 2021 at 8:27 PM
WiFi လေးနဲ့ တာဝန်လာကျေတာ😉😉
Unknown December 30, 2021 at 8:37 PM
Unknown December 30, 2021 at 8:41 PM
Unknown December 30, 2021 at 8:49 PM
၂၀၂၂ မှာ အ​ရေး​တော်ပုံ မုချ​အောင်ရမည်
အ​ရေး​တော်ပုံ​​အောင်ရင် ကျန်တာ အားလုံး မ​တောင့်တပါ ပြည့်စုံပါပြီ
Myate December 30, 2021 at 8:59 PM
Unknown December 30, 2021 at 9:06 PM
Sar twl phat lo ya yin kg mr 😢💪
Sammi December 30, 2021 at 9:20 PM
17 2715 8297 8351 6580(Tele)
Mission ​အောင်ဖို့ ဝုန်းကြစို့
Ishida December 30, 2021 at 9:25 PM
Hla Hla Nue December 30, 2021 at 9:37 PM
The best one of articals
Ei Zar Phyu December 30, 2021 at 9:38 PM
nyi hmue thwin December 30, 2021 at 9:45 PM
Nguwar December 30, 2021 at 9:49 PM
hoyfound December 30, 2021 at 10:04 PM
rain December 30, 2021 at 10:08 PM
khin Nwe December 30, 2021 at 10:16 PM
Unknown December 30, 2021 at 10:23 PM
အားလုံး click ကြပါ
Unknown December 30, 2021 at 10:48 PM
Unknown December 30, 2021 at 10:50 PM
ko phyo December 30, 2021 at 10:57 PM
app ထဲ ကနေ ပြန်ပြန် ထွက်သွားတယ် ဘယ်လို လုပ်ရမလည်း ခင်ဗျာ
Capt Ye Thu December 30, 2021 at 10:57 PM
ပြည်သူမှာ ပြည်သူတွေ ရှိတယ်
phoophoo December 30, 2021 at 11:07 PM
January December 30, 2021 at 11:55 PM
Unknown December 31, 2021 at 12:09 AM
Best effort of the ppl
Chan Myae December 31, 2021 at 12:50 AM
Federal Democracy New Year
ရွှေမန်း December 31, 2021 at 12:55 AM
speed up all 2gether..!
Unknown December 31, 2021 at 1:41 AM
KG December 31, 2021 at 2:14 AM
Fighting all clickers.
Hlwan Nway Oo December 31, 2021 at 2:47 AM
Tun Linn Myat December 31, 2021 at 4:37 AM
Myo December 31, 2021 at 4:42 AM
Unknown December 31, 2021 at 5:06 AM
Unknown December 31, 2021 at 5:16 AM
Fighting ❣️💪 သိန်းတစ်သောင်းပြည့်ချင်တယ်ဗျို့💪💪💪
Unknown December 31, 2021 at 5:38 AM
ရွှေမန်း December 31, 2021 at 5:41 AM
Unknown December 31, 2021 at 5:51 AM
HS December 31, 2021 at 6:13 AM
ChanMyae December 31, 2021 at 6:45 AM
Unknown December 31, 2021 at 6:48 AM
Thu Ra Soe December 31, 2021 at 6:59 AM
dipa December 31, 2021 at 7:12 AM
Thar Gyi December 31, 2021 at 7:15 AM
အနာဂါတ်တွေလှပဖို့ PDF ကိုထောက်ပံ့စို့...
Unknown December 31, 2021 at 7:16 AM
Sunshine 💦 December 31, 2021 at 7:40 AM
Nway Oo Yaung Ni December 31, 2021 at 7:49 AM
2021မှာ ကိုယ့်အရမ်းခင်တဲ့သူတွေကို ကျောခိုင်းလက်လွှတ်ထားခဲ့ရတယ် အမြင်တွေမတူတာကြောင့် အရာရာပြောင်းလဲလာသလို အတွေးအမြင်တွေကျယ်လာခဲ့တယ် 2022မှာမြန်မာပြည်ကြီး ငြိမ်းချမ်းပါရစေ စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေလည်း အဆင်ပြေ ဘေးကင်းကြပါစေ
TT December 31, 2021 at 7:59 AM
Ni Ni Phoenix December 31, 2021 at 8:02 AM
Unknown January 12, 2022 at 8:49 AM
NAK December 31, 2021 at 9:22 AM
Unknown December 31, 2021 at 9:24 AM
Unknown December 31, 2021 at 10:20 AM
Hla Hla Nue December 31, 2021 at 10:53 PM
Unknown January 2, 2022 at 8:06 AM
Lwin Lwin January 2, 2022 at 9:06 AM
Unknown January 3, 2022 at 5:39 AM
Done ❣️💪 fighting all ❣️💪
Hla Hla Nue January 5, 2022 at 7:51 PM
Thet Aung January 7, 2022 at 1:13 AM
Clicker January 8, 2022 at 7:31 AM
အရေး တော်ပုံအောင်ဖို့အရင်ချမှတ်လိုက် ဦးမယ် ဆရာ thank for sharing your knowledge
Zin Ko Lwin January 14, 2022 at 1:05 AM
Unknown February 17, 2022 at 10:49 PM